Kutheni I-E-Rubber Ngoko Sizzling Kwaye bamkelwa wena. - Jomo Technology Co., Ltd
Yinyaniso ngokupheleleyo, xa besithi ukuba unique, kukho uhlobo olunye ukuze eyaziwa ngokuba iOS kwimarike kakade. Ezi isandla-free ngezithuthuthu zombaneingahoywa okanye Rubber yombane ukuya kwiindawo million, kwaye ayinamsebenzi ikokubize ngayo. Koowheel inguqulo entsha zombane Rubber Kooboard: Leyo yindlela enkulu kubantu abatsha ukuba bulisa ukuhamba ngexesha elifanayo. Sithatha kumnandi nje Rubber, kube njengento elula ukusebenzisa njengoko isithuthuthu, emva koko kulinika wena umbhalo extra elincinane jb. Electric Rubber ke abotshwe nge fun kwaye iba nto uyithandayo izizwe ezininzi ezincinane. An Rubber yombane yayilwa kwaye nesuka Koowheel uphawu e-China.
Ngenxa yoko, ukuba uthi, ukuba Rubber andibanga isixhobo umdla kuphela kodwa ukuphucula umgangatho wobomi umntu kaThixo ngendlela ethile. Kusenokuba wongezelela bhetyebhetye kunye uhambo made. Ukuba ndikhangele ukuba indlela yabucala zokuhamba angakusa ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, ngokukhawuleza, kufuneka ukhethe ukuba Ulobumba ngakunye yabathengi. Inxalenye ebalulekileyo ukuthuthwa lwemigangatho ongenamava kukuba iilori ukufumana okuphambili ngapha izithuthi siqu ngenxa ezinqabileyo yokupaka ezidla esisodwa. Abantu ngokubanzi ziye; ngokuba ixesha lokuqala, liqalise ehlabathini yokuthuthwa self-balancing.
Koowheel Skateboards zakhiwa nokuthantamisa nenamandla ngexesha bakunike uhambo zimtyibilizi phaya. Kuyo uphando lwethu saqonda ukuba iintlanga ezininzi Asia ukuba sele kakhulu mkhulu electro-ukushukumiseka kwaye ngandlela ithile, lonke uhambo lweshishini, sasisele zaboniswa ngezithuthuthu zombane, hambisa iibhodi kunye - skateboards! Ezi iibhetri ukuba sele kusetyenziswa ombane ezingachanekanga okanye iiseli zonakeleyo neebhodi misa eziliqela umlilo kanti bamthethela umgcini okanye kuhanjwa. Kodwa akukho nto imangalisayo ngabo, ukuba kungaba into yokuba angasisichenge kuyo umvuzo leholide kulo nyaka igcina ubambisa ngomlilo. Into yokuqala isaziso xa ujonga kwi scooter impahla entsha okunene yokungabikho emsebenzini, okanye umsantsa, ngexesha lo matshini. I Koowheel i wenza self ukulingana scooter Chinese ukuba oko likulungele ukuba ukuzoba iintlobo ezininzi hoverboard ngenxa eyilwe silk.